बुर्ज खलिफामा फ्ल्याट, भारतमै नभएका कार लगायत विश्वकै महङ्गो उपहार दिन्थे राज ! – Kavrepati
Home / मनोरंजन / बुर्ज खलिफामा फ्ल्याट, भारतमै नभएका कार लगायत विश्वकै महङ्गो उपहार दिन्थे राज !
admin July 26, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 86 Views
एजेन्सी : बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्ठी यतिबेला चर्चाको शिखरमा छिन् । उनका पति राज कुन्द्रा नि’लो चलचित्र बनाएको भन्दै हिरासतमा रहेदेखि नै शिल्पाको चर्चा चुलिएको हो । राज कुन्द्राले आफ्नी पत्नीलाई वि’लासी जीवन दिन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । उनले शिल्पालाई बुर्ज खलिफामा फ्ल्याट, महँगा कारहरू उपहारका रुपमा दिएका थिए।
शिल्पा विवाहको वार्षिक उत्सवमा सबैभन्दा महंगो उपहार पाउने नायीका समेत हुन् । विवाहको वार्षिकोत्सवमा, राज कुन्द्राले शिल्पालाई विश्वको सबै भन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफाको १९ औं तलामा एउटा अपार्टमेन्ट उपहार स्वरूप दिएका थिए । यद्यपि शिल्पाले सबै सम्पति बेचिसकेको बताउँदै आएकी छिन् । विवाहको वार्षिकोत्सव मात्र होइन, विवाहको अवसरमा पनि राज कुन्द्राले शिल्पा शेट्टीको लागि यस दिनलाई स्मरणीय बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
कोस्मोपोलिटनका अनुसार राजले शिल्पालाई ५० लाख रुपैयाँको विवाहको लेहंगा दिएका थिए, ३ करोड रुपैयाको हिराको हार दिएका थिए । राज कुन्द्राले शिल्पा शेट्टीको सपना पनि साकार गरेका छन् । समुन्द्री किनारमा बंगलाको चाहना राखेकी शिल्पालाई उनले त्यो चाहना पनि पुरा गरिदिएका छन् । उनले मुम्बईमा लक्जरी विला शिल्पालाई उपहार दिएका छन् ।
यस भवनको नाम ुकिनाराु हो र शिल्पा धेरैजसो समय यस विलामा बिताउँछिन्। दुबई र मुम्बईमा मात्र होइन, २०१२ मा, राज कुन्द्राले शिल्पाको नोएडामा ८० तलाको भवन अपार्ट मेन्ट सुपर्नोवामा ३००० वर्गफुटको अपार्टमेन्ट किनेका थिए । भारतमा मात्रै होइन, इंग्ल्याण्डमा पनि राजाको लागि, राजले एउटा वि’लासी (कोठाको घर किनेका छन् जसको नाम राज महल हो।
राज महल बाहेक राजले शिल्पालाई मध्य लन्डनमा ७ करोडको लक्जरी घर उपहार स्वरूप दिएका छन्। महँगो कार मनपराउने राज कुन्द्राले प्रायः बिएमडब्लु कारहरू गिफ्ट गरिसकेका छन्।जब राजले शिल्पालाई लेम्बोर्गिनी कार गिफ्ट गरे पनि उनको यो उपहार को धेरै चर्चा भएको थियो। त्यसबेला शिल्पा मात्र एक युवती थिइन् जो संग लाम्बोर्गिनीको संस्करण थियो। किनकि यो कार भारतमा अझै सुरू गरिएको छैन।
Previous देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि दीपकराजको यस्तो व्यंग्य
Next काठमाडौँ उपत्यकामा एकाएक किन लागु गरियो फेरि यस्तो नयाँ नियम, सबैले अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने